साँच्चै अब देश बनाउने हो ?
जति प्रदेशमा मुलुक बाँडिन्छ, त्यति नै प्रदेशमा ठूल्ठूला अस्पतालहरू स्थापना गर्ने । जनताको स्वास्थ्य बीमा गरी सबै प्रकारका रोगमा निःशुल्क, न्यूनशुल्क र सामान्य शुल्कमा उपचारको व्यवस्था गर्ने ताकि सामन्य नेपालीले उपचारका अभावमा मर्नु नपरोस् ।
नेपाल पूर्ण संघीयतामा जानै सक्दैन
नेपाल पौराणिक कालदेखि एकल राष्ट्र र राज्यको अवस्थामा छ । आज नेपाल पूर्ण रूपले आधुनिक राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल पूर्ण संघीयतामा जानै सक्दैन । अर्ध संघीयता भनेको कतिपय संरचनागत पक्षमा संघीयताको भान हुने तर सारमा भने विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा नै रहने हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन : हार्न तयार पौडेल
अहिले सभापति देउवाको भाग्यले डोकोमा दूध दुहुँदा पनि अड्याईदिएको छ । यता पौडेलको भाग्य विगत केही वर्ष यता च्यातिदै गएको अवस्था पनि हो । पौडेलको च्यातिएको भाग्यलाई सिलाउने प्रयास र प्रयत्नमा रहेको डा. शेखर कोइरालाहरु काविल देखिएनन् । हुन त समाप्त प्रायः बन्दै गएका पौडेललाई काँधमा बोकिरहेका शेखरले आफ्नो काँध र विश्वास नथाकेको सार्वजनिक गरेका छन् । ‘कुखुरे चित्तका पौडेल गुनिला छैनन्,’ उनका निकटस्थहरुको विश्लेषण हो यो ।
पेशल आचार्य - संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलालाई द्रूतत्तर गतिमा अघि बढाउने हो भने नेपाली समाज अब घस्रने, हिँड्ने होइन दौडने र छलाङ् मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । पढेलेखेको युवा पुस्ताले जस्तो चौतर्फी नवीन प्रविधि र सोच अख्तियार गरेको छ त्यसलाई राज्यका विभिन्न अङ्गले सपोर्ट गर्न सकेको छैन ।
राजाको संरक्षकत्व आवश्यक
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अतिरिक्त एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीको आवश्यकतालाई महसुस गरेर तत्कालीन निर्दलीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत रहेर काम गरेका राजनीतिक शक्तिहरुको एउटै राजनीतिक दल निर्माण गर्ने र संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सर्वमान्य मूल आदर्शलाई आत्मसात गर्दै एक सवल र देशको लागि वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ २०४८ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना भएको हो ।
साला काङ्ग्रेस !
२०४४ सालमा हिउँदको सुरुवातसँगै तत्कालीन ‘प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस’का अर्ध–भूमिगत सदस्यहरू सीताराम मेहता र मोहन श्रेष्ठ नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा बालकृष्ण खाँडलाई अध्यक्ष बनाउन भोटरहरू सिला खोज्दै हिँडिरहेका रहेछन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन र नेपाली राजनीतिको संयोग
कटुसत्य यस्तो पनि छ– अविचारको दलदलबाट कांग्रेसलाई निकाल्न जरूरी छ । लाखौं युवा कार्यकर्ताहरू यही भावले विचरण गरिरहेका छन् । जसका मनको आवाजमा शेरबहादुर समान अवसरको संगीत बनी धून भर्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो उनले अख्तियार गर्ने कार्यशैलीले केही महिना र वर्षमा बताउने नै छन् ।